Astaamaha, goobta iyo quraafaadka xiddigta Cassiopeia | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Astronomy
Ku sii wada adduunka xiisaha leh ee xiddigahaMaanta waxaan falanqeyneynaa taariikhda iyo astaamaha mid ka mid ah kuwa ugu caansan waqooyiga dunida. Ku saabsan yahay Cassiopeia. Waa xiddig ka kooban 5 xiddigood oo ka iftiin badan inta kale oo leh astaamo dabeecad ahaan laba nooc ah (W). Waxay leedahay wax gaar ah haddii aan isbarbardhigno xiddigaha kale ee samada. Waana in qaabkeedu aad u kala duwan yahay iyadoo kuxiran waqtiga sanadka iyo baaxadda aan ku fiirsaneyno.
Maqaalkan waxaad ka heli kartaa qarsoodiga ugu qoto dheer ee mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan adduunka. Ma rabtaa inaad ogaato asalka iyo taariikhda Cassiopeia? Akhriso si aad wax walba u ogaato.
1 Astaamaha ugu muhiimsan
2 Goobta Cassiopeia ee cirka habeenkii
3 Asalka iyo Caqiidada
4 Cirfiidka Cassiopeia
Ururka Caalamiga ah ee Cirku waxa uu aasaasay 88 xiddigood oo casri ah iyo 48 xiddigood oo kale oo Ptolemaic ah. Laga soo bilaabo kooxdan badan, Cassiopeia waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna muhiimsan labadaba ictiraafka cirka iyo asalka iyo quraafaadka ka dambeeya labadaba.
Waxay ka kooban tahay 5 xiddigood oo ifaya in ka badan inta kale waxayna aad ugu dhowdahay woqooyiga cirka. In badan oo ka mid ah waddamada ku yaal woqooyiga woqooyi, waxaan arki karnaa Cassiopeia habeenkii oo dhan. Mahadsanid muuqaalkeeda, waxay tilmaami kartaa cimilada dhinaca meelaha qaar.
Waxay leedahay qaab W ah oo beddelaya waxay kuxirantahay meesha aan ilaalinayno iyo waqtiga sanadka aan kujirno. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ixtiraam qaabkaas W.
Xiddigaha ugu waaweyn waxaan ka helnaa:
- Schedar, 2.2, jaalle Xiddigtaas magaceedu waa laabta.
Cap - Caph, 2.3, cadaan Magaceedu wuxuu ka yimid magaca Carabiga oo waxaa u jira 46 sano oo iftiin ah.
Ci - Cih, qiyaastii 2.5, buluug-cad. Xiddigaani waa midka kiciya xiisaha ugu badan ee ay qabaan taageerayaasha xiddigta. Waana in magaceeda gabi ahaanba aan la aqoon oo uu leeyahay baaxad u dhaxeysa 3.0 iyo 1.6. Saynisyahanada qaar waxay u maleynayaan in xawaaraha uu ku leeyahay wareegiisa ay ka dhigeyso mid aan xasillooneyn waana sababtaas sababta dhalanteedka giraanta gaaska loo arki karo.
Goobta Cassiopeia ee cirka habeenkii
Waxaan ogaaneynaa sida aan ku heli karno xiddigtaan cirka habeenka. Ahaanshaha xiddig wareega ah (tani waxay ka dhigan tahay inay had iyo jeer ka taagnaan doonto cirifka woqooyiga hijriga), waxaan arki karnaa qaabkeeda aan la qiyaasi karin ee W. Waxaa lagu heli karaa qaab fudud, maadaama ay ku taal booska ka soo horjeedka Bear Weyn iyadoo la tixgelinayo polar Star. Cunniyaha Weyn ayaa aad uga fudud in la aqoonsado kaligiis, waana taas sababta, markii la arko, sidaas kaliya waa inaan fiirino wadada kale si aan u aragno W taas ayaa na calaamadeyn doonta halka uu ku yaal Cassiopeia.
Bartamaha kooxdani waxay leedahay goyn ku dhowaad 60 ° N iyo midig u kac ah oo hal saac ah. Markaad aragto Cassiopeia waxaad sidoo kale heli kartaa Xiddigta Caanka, maaddaama ay u dhowdahay barta ay labada dhinacba ka kala sameysmayaan W dariiqaas lagu raadinayo Cassiopeia oo leh Pole Star waa mid muhiim u ah hagidda maaddaama ay tilmaamayso Waqooyiga runta oo leh saxnaan ku filan. Intaas waxaa sii dheer, dhererka uu sida caadiga ah ka sarreeyo cirifka inta badan wuxuu la jaan qaadayaa loolka uu joogo goobjooguhu.
Asalka iyo Caqiidada
Asalka kooxdan xiddigta waxaa dib loogu eegi karaa halyeeygii boqoradda Cassiopeia iyo nolosheeda nasiib darrada ah. Waxay ahayd naagtii Boqor Cepheus oo reer Joppa ahaa, oo waxay dhashay gabadh magaceeda la yidhaahdo Andromeda. Labaduba waxay ahaayeen haween qurux badan, sidaa darteed boqoradda Cassiopeia waxay gashay dambiga hubi in iyada iyo gabadheeda ay ka qurux badan yihiin astaamaha badda loo yaqaan Nereids. Nereids waxay ahaayeen gabdho xikmad badan oo ku noolaa badda la yiraahdo Nereus.
Markii ay Nereids ka maqleen Cassiopeia inay iyagu ka qurux badan yihiin, way ka xumaadeen oo waxay aadeen Poseidon si ay uga aargoostaan. Poseidon sifiican ugama uusan fadhiyin hadalada noocaas ah wuxuuna adeegsaday shaqadiisii ​​uu ku fatahay dhamaan dhulalka xeebta Falastiin. Intaa waxaa dheer, wuu wacay bahal Cetus inuu ka soo weeraro moolka.
Dhinaca kale, Cepheus wuxuu la tashaday oraahda Amun si uu u ogaado sida uu dadkiisa u badbaadin karo. Dariiqa kaliya ee ay ahayd wuxuu gabadhiisa Andromeda ugu huray Cetus. Tan awgeed, Andromeda waxaa lagu xiray silsilado ku yaal xeebta Joppa. Cetus markay aragtay iyada oo silsiladaysan oo ay u kacdo inay weerarto ayay u muuqatay Perseus inuu la dagaallamo isaga oo ku beddelaya gacanta Andromeda.
Goor dambe, markii arooska u dhexeeyey Perseus iyo Andromeda uu dhacay, waxaa soo muuqday Phineus, oo aad u masayrsan guur doonkii hore ee Cassiopeia. Wuxuu amar ku siiyay ciidan ka kooban 200 oo dagaalyahano ah oo ka soo horjeeday Perseus kanna, wuxuu soo saaray madaxii go'ay ee medusa si loo hubiyo dhammaan dagaalyahannada.
Ugu dambeyntiina, ciqaab ahaan wixii dhacay oo dhan, Poseidon wuxuu Cassiopeia galiyay jawi aan fiicnayn oo aan qurux badnayn oo jannada ku jira.
Waxa loogu yeero cirfiidka Cassiopeia waa a nebula in waa 550 sano oo iftiin ah. Waxay leedahay dhalaal ethereal ah waxayna ku milmaan muuqaalada cirfiid ee muuqaalka cirfiid ee halkan Dunida. Waxaa sameeya tamarta xiddigaha karkaraya ee sii daaya gaasaskan dareeraha ah iyo boodhka sameeya muuqaalkan xiisaha leh.
Iftiinkeeda iyo qaabkeedu waxay u eg yihiin daruur la mid ah tan kiisaska aan caadiga ahayn. Si kastaba ha noqotee, halabuurka daruurtani gaaska iyo siigadu waa haydarojiin oo si isdaba joog ah u qarxinaya shucaaca ultraviolet ee uu sii daayo xiddig weyn oo buluug ah oo u dhow oo la yiraahdo Gamma Cassiopeiae. Shucaacani wuxuu keenaa in xidigu u iftiimo casaan qaybta buluuga ahna waa iftiin ka soo baxa boodhka nebula.
Tani waa sharaxaadda cirfiidka caanka ah ee Cassiopeia. Si kastaba ha noqotee, si aad u aragto waxaad u baahan tahay telescope aad u xoog badan oo qof walba uusan marin u helin.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku ogaatay wax badan oo ku saabsan xiddigta Cassiopeia iyo taariikhdeeda oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Xiddigta Cassiopeia
Roobka kalluunka iyo raha